एक युवतीको २ वटा योनी २ वटा पाठेघर, १८ वर्षकी हुँदासम्म अन्जान | Cyprus-Nepal.com
एक युवती दुईवटा गर्भाशय र २ वटा योनीको साथमा जन्मिएको पाइएको छ ।
यसलाई मेडिकल विज्ञानको क्षेत्रमा सम्भवतः पहिलो केस मानिएको छ । दुर्लभ शारीरिक बनोटका कारण यी युवती गर्भवती भएका बेला पनि उनको महिनावारी हुन सक्छ ।
पेन्सलभेनियाको फिलाडेल्फिया सहरकी २० वर्षकी पेज डिएन्जेलो नामकीयी युवतीमा गर्भाशयको दुर्लभ समस्या भएको पाइएको हो ।
डेलीमेलका अनुसार पेजको शरीरमा पूर्ण रुपमा काम गर्न सक्ने दुई प्रजनन प्रणाली छन् ।
यही कारण उनको एक महिनामा २ पटकसम्म महिनावारी हुन्छ ।
यसको अर्थ उनी आफ्नो एक गर्भाशयबाट गर्भवती हुन सक्छिन् तर त्यही समयमा उनको अर्को गर्भाशयबाट महिनावारी पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उनले आफू गर्भवती भएको थाहा नपाउन पनि सक्छिन् ।
यतिमात्र होइन उनी आफ्ना २ गर्भाशयबाट छुट्टाछुट्टै गर्भवती पनि हुन सक्छिन् ।
पेजको एक महिनामा २ पटक महिनावारी चक्र पूरा हुन्छ र यो महिनावारी फरक फरक समयमा हुन्छ ।
पेजले यो अनौठो शारीरिक अवस्थाको जानकारी आफू १८ वर्षकी भएपछि मात्रै पाएकी थिइन् ।
त्यतिबेला उनी महिनामै २ पटक महिनावारी हुने समस्याका कारण स्त्रीरोग विशेषज्ञकहाँ गएकी थिइन् ।
पेजलाई कहिलेकाहीँ हरेक २ हप्तामा महिनावारी हुन्थ्यो ।
उनको जाँचपछि डाक्टरले पेजकी आमालाई बोलाएर आमाको साथमा यो स्वास्थ्य समस्याबारे बताएका थिए ।
यो समाचार पनि पढ्नुहोस् : महिलाको पिसाब चुहिने (मूत्र असंयम) समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने ?
महिलाको पिसाब चुहिने (मूत्र असंयम) समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने ?
01/07/2021 NewsRoom 0
One thought on “एक युवतीको २ वटा योनी २ वटा पाठेघर, १८ वर्षकी हुँदासम्म अन्जान”
Pingback: ४५० नेपालीलाई ठग्ने व्यवसायीलाई ८ अर्ब रुपैयाँको ठगी मुद्दा | Cyprus-Nepal.com